त्रिभुवन विमानस्थलमा ७९ जना यात्रु सवार विमान दुर्घटना, केछ अवस्था ? — Sanchar Kendra
त्रिभुवन विमानस्थलमा ७९ जना यात्रु सवार विमान दुर्घटना, केछ अवस्था ?
काठमाडौँ । त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरण गर्ने क्रममा फ्लाई दुबईको विमानमा चरा ठोक्किएको छ । जहाजको बायाँ पङ्खामा चरा ठोक्किएको त्रिभुवन विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयका एसएसपी राजेशनाथ बास्तोलाले बताए । दुर्घटनामा मानवीय क्षती भने भएको छैन् ।